Maxkamada Gobolka Banaadir oo Maanta Riday Xukuno kala Duwan |
Maxkamada Gobolka Banaadir oo Maanta Riday Xukuno kala Duwan
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday dad ku eedeysnaa danbiyo kala gadisan gudoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir Dr Xaashi Cilmi Nuure ayaa ku dhawaaqay xukunada ay maxkamadu riday wuxuuna sheegay in maxkamada maanta la hor keenay 12 eedeysane oo loo haysto danbiyo ay ka mid yihiin dil,dhac,burcadbadeednimo,isku day Kufsi iyo xatooyo.
Gudoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir Dr Xaashi Cilmi ayaa sheegay in 6 kamid ah 12 eedeysane ay maxkamadu ku riday xukuno kala duwan,Maxkamada ayaa min 13 sano oo xarig ah iyo 13 milysan oo shilin Soomaali ah ku xukuntay Cali Muuse oo 25 jir ah iyo Daa’uud abuukar oo 26 sano jir ah kadib markii lagu helay fal burcadnimo ah oo ay ku keceen.
Maxkamada ayaa 2 sano oo tacshiir xabsi ah ku xukuntay Cabdalla Maadeey iyo inuu diyo boqol ah siiyo ehelada Marxuum Max’ed Abuukar oo uu si kama ah i dilay.
Max’ed Xamed Cali oo lagu helay isku day Kufsi iyo dhaawacyo uu u geystay dhibane Xabiibo Max’ed waxayna maxkamadu ku xukuntaya 8 sano oo xarig ah iyo 8 milyan oo shilin Soomaali ah maalintiiba 20 kun shilin Soomaali ah.
Maxkamada ayaa Max’ed Cismaan Camey ku xukuntay 2 sano oo xabsi tacshiir ah isla markaane uu diyo Boqol ah siiyo ehelada dhibane marxuum C/rashiid Max’ed Xaashi oo uu si aan kas ahayn u dilay,waxaana sidoo kale 30 sano oo xarig ah iyo Milyan lagu xukumay Mahd Cumar oo isne ka mid ahaa dadkii maanta xukunka ay ku riday maxkamada gobolka Banaadir.